Adidy hanonerana ny fahasimban'ny Palestiniana tsy manan-tsiny - Raby Michael Avraham
Adidy handoa onitra noho ny fahasimban'ny Palestiniana tsy manan-tsiny
Responsa > Sokajy: Jeneraly > Adidy handoa onitra noho ny fahasimban'ny Palestiniana tsy manan-tsiny
hazo kesika Nanontaniana 5 volana lasa izay
Misy adidy amin'ny Fanjakan'Israely ve ny manonitra ireo Palestiniana tsy manan-tsiny izay niharan-doza tamin'ny fihetsiky ny Fanjakan'Israely tamin'ny Hamas?
Ary fanontaniana iray hafa, raha lavo ianao fahadisoana Amin'ny fihetsiky ny hery iray, ary vokatry ny fahadisoana nandratra Palestiniana iray, misy adidy ve ny hanonitra azy?
mikyab Staff Voavaly 5 volana lasa izay
Ao amin'ny lahatsoratro momba ny olana amin'ny rindrina fiarovana (olon-tokana sy ho an'ny daholobe), ny fehin-kevitra dia hoe raha misy antoko fahatelo (tsy Palestiniana) no voadona tamin'ny hetsika ataontsika, dia hoy aho hoe eny, ary avy eo ny Hamas dia azo toriana. ny fahasimbana. Fa raha ny momba ny Palestiniana, dia toa hitako fa tokony hitodika mivantana any amin'ny Hamas izy ireo, izay miady ho azy ireo ary ny iraka no hanonitra azy ireo. Tahaka ny tsy ilaina ny fanonerana ny olona iadiana amin'ireo miaramila izay naratra tamin'ny ady tsy amin'antony. Voalaza fa rehefa misy ny ady dia miparitaka ny poti-basy.
hazo kesika Namaly 5 volana lasa izay
Tadidiko fa nanoratra koa ianao teo fa raha afaka mamonjy ny mpanenjika amin'ny rantsany iray ny mpanenjika nefa tsy mamonjy dia tsy maintsy. Nahoana no tsy mitombina eto koa ny momba ny fahadisoana?
mikyab Staff	Namaly 5 volana lasa izay
Voalohany, iza no nilaza fa toe-javatra azony novonjena izany? Misy ireo mpitsoa-ponenana marefo izay tsy azo ihodivirana. Faharoa, na dia misy fomba hialana amin'ity tranga manokana ity aza dia mitranga ny fahadisoana ary anisan'ny fomban'ny ady.
Ny fomba fiasan'i Maimonides dia ny hoe tsy voatery ny famonoana toy izany. Fady fa tsy mpamono olona. Ny fomba Thos dia eny.
Nilaza i Hasbra fa raha nanimba tsy nahy ny fananan'ny tompony aho dia tsy mila manonitra azy. Ary ny sasany voalohany sy farany nanoratra fa ao amin'ny enjehina ny tenany dia tsy misy fandrarana ny hamono na dia afaka mamonjy azy amin'ny rantsany iray aza. Ny antoko fahatelo ihany no lazaina izany.
Raha misy tranga iray izay nivily lalana ny iray amin'ireo iraka avy amin'ny Fanjakan'i Israely (miaramila/polisy) ary nanao fihetsika feno habibiana tamin'ny olom-pirenena Palestiniana (eritrereto hoe misy miaramila nanolana Palestiniana). Amin'ny toe-javatra toy izany, misy adidy ve ny Fanjakan'Israely hanonitra ny niharam-boina iray ihany?
Izay raha ny hevitro. Misy ny toerana hitory ny miaramila izay hamerina ny vola amin’ny fanjakana. Fa ny hery sy ny hery (fahefana sy fitaovam-piadiana) nomeny azy, ka izy no tompon'andraikitra amin'ny zavatra nataony.
Raha nisy nanolana tsy misy dikany izy, tsy tamin’ny herin’ny fitaovam-piadiana na ny fahefana azony fa toy ny lehilahy hafa rehetra, dia araka ny fahitako azy manokana ny fitakiana azy ary tsy misy adidy amin’ny fanjakana ny manonitra izany.
Raha ny andraikitry ny fanjakana dia ahoana no ifanarahana amin’izay nosoratanao tetsy ambony hoe tsy tompon’andraikitra amin’ny fahadisoany ny fanjakana, fa eto kosa dia tompon’andraikitra amin’ny haratsian’ny iraka (izay raha ny fahitan’ny fanjakana azy dia tsy heverina ho ratsy).
Satria misy resaka fahasimbana vokatry ny ady, ary tsy misy andraikitra amin’izany satria misy ny lalàna fanenjehana iombonana. Saingy ny fihetsika tsy misy dikany fotsiny izay tsy natao ho an'ny ady dia azo antoka fa manana adidy hanonerana. Tsy misy lalàna manenjika eto.
Tranga mitovy amin'izany no fantatra fa tamin'ny taona 2000 i Mustafa Dirani dia nitory ny Fanjakan'i Israely noho ny onitra, tamin'ny filazana fa niharan'ny fanararaotana ara-nofo roa nataon'ireo mpaka am-bavany azy. Ankoatra ny zavatra hafa, ny fiampangana dia milaza fa ny lehibe ao amin'ny Unit 504, fantatra amin'ny anarana hoe "Kapiteny George", dia nampiditra ireo tao amin'ny anus Dirani. Araka ny voalazan'i Dirani, nandritra ny fakana am-bavany azy dia nampijalijalina izy, anisan'izany ny fanozongozonana, ny fanalam-baraka, ny daroka, ny tsy fahampian'ny torimaso, ary ny fatorana amin'ny toerana mandohalika mandritra ny ora maro, ary noho ny fanalam-baraka azy dia nalaina am-bavany izy rehefa niboridana. Naseho tao amin'ny fandaharana fahitalavitra "Fact" tamin'ny 504 Desambra 15 ny horonam-peo fanadihadiana, nalain'ny Unit 2011.  Ao amin'ny iray amin'ireo horonan-tsary, i George mpanao famotorana dia hita miantso ny iray amin'ireo mpanao famotorana hafa ary nanome toromarika azy hanakodia ny patalohany ho any amin'i Dirani ary handrahona an'i Dirani amin'ny fanolanana raha tsy manome vaovao izy.
Tamin'ny Jolay 2011, nanapa-kevitra ny Fitsarana Tampony, araka ny hevitry ny maro an'isa, fa i Dirani dia afaka manohy manohy ny fitakiana fanenjehana napetrany amin'ny Fanjakan'i Israely, na dia mipetraka ao amin'ny fanjakana fahavalo aza izy, ary miverina amin'ny fandraisany anjara amin'ny hetsika fankahalana ny firenena. fanjakana  Tamin'ny fangatahan'ny fanjakana dia nisy fitsarana hafa natao, ary tamin'ny Janoary 2015 dia nanapa-kevitra ny hanafoana ny fitakian'i Dirani, noho ny antony fa taorian'ny namotsorana an'i Dirani avy tany am-ponja dia niverina tany amin'ny fikambanana mpampihorohoro iray izay mikendry ny handray fepetra amin'ny fanjakana. ary mandrava azy mihitsy aza.
Hita amin’izany fa misy ifandraisany amin’ny fanontaniana hoe mipetraka ao amin’ny fanjakana fahavalo ilay mpitory sa tsia. Tsaroako ihany koa fa misy fitsipika tamin'ny andron'ny lalàna britanika izay milaza fa tsy afaka mitory ny fahavalo.
Tsy ara-dalàna ny valin-teniko (tsy manam-pahaizana momba ny lalàna iraisam-pirenena aho). Nolazaiko ny hevitro momba ny moraly.
Ho an'i Dirani, ny olana dia tsy hoe miaina ao anatin'ny fanjakana fahavalo izy fa fahavalo mavitrika. Na iza na iza miaina ao amin'ny fanjakana fahavalo dia azo antoka fa afaka mitaky onitra, fa raha misy zavatra atao aminy tsy ara-dalàna fa tsy ao anatin'ny tontolon'ny ady (izany hoe manimba olona tsy manan-tsiny). Heveriko fa tsy natao hanararaotana azy fotsiny ireny fampijaliana ireny fa hakana vaovao avy aminy. Noho izany dia hetsika toy ny ady ireo. Raha vao avy nanao fanararaotana izy ireo, na dia tao amin’ny tobim-paritry ny GSS aza no nanaovana ny fanadihadiana, dia na fahavalo aza izy dia mety ho afaka hitaky onitra, ary izay no nitranga tao.
Raha ny marina, ny tohan-kevitra hoe raha manapotika ny fanjakana izy dia manaisotra ny zony hampiasa ny andrim-panjakana ao aminy dia toa mampiahiahy ahy ara-dalàna. Ny miaramila fahavalo rehetra (babo) dia ao anatin'izany toe-javatra izany, ary inoako fa tsy hisy hilaza izany momba ny miaramila iray. Nilaza izany momba an'i Dirani izy ireo satria mpampihorohoro izy.
Ambonin'izany, misy ny tohan-kevitra eto: raha nihoatra noho izay azo natao ny fanararaotana na natao noho ny fanararaotana tokana, dia na dia tsy manan-jo hitory aza i Dirani dia tokony nanadihady sy nanasazy izay nanao izany ny fanjakana (sazy heloka bevava, na inona na inona fanenjehana sivily an'i Dirani). Ary raha tsy nivily izy ireo - dia inona no zava-dehibe fa fahavalo izy. Tsy misy antony hanaovana hetsika.
Omeo onitra ireo mpampihorohoro Namaly 5 volana lasa izay
B.S.D. XNUMX tao amin’ny foko P.B
Toa ireo fikambanan'ny mpampihorohoro izay ilain'ny IDF amin'ny famonoan'olona ataon'ny IDF amin'ny hetsika fiarovana sy fisorohana no tokony hanonerana ny fahavoazana nateraky ny ady tamin'ireo sivily tsy manan-tsiny, Jiosy ary Arabo.